किन फुट्यो माओवादी ? - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
एक वर्र्ष अघिदेखि चरम विवादमा फसेको माओवादी हिजोदेखि औपचारिक रुपमा फुटेको छ । फुटलाई अनेक रंग दिएता पनि फुटको कारण भने व्यक्तिगत टकराव नै हो । सरकार र सत्तामा पुगेपछि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड असफल हुनुभएको पक्कै हो । आफ्नो राजनीतिलाई कहिले तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग त कहिले अर्का उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको साथ लिएर सधैं जित्ने प्रचण्ड हिजोदेखि हार्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको सपना देख्नुभएका प्रचण्डको चरम महत्वाकांक्षाले यो स्थिति आएको हो । मोहन वैद्य किरण पक्षलाई साह्रै पेल्ने कारणले फुटले फुट्ने अवसर पायो । अब प्रचण्डसँग केही छैन । सिङ्गो पार्टी छैन, जनसेना छैन, जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभा संविधान नबनाई विघटन भएको छ ।
जनयुद्धमा लडेका योद्धाहरु, सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र अंगभंग भएकाहरुको बहुमत मोहन वैद्य किरणसँग जोडिएका छन् । मोहन वैद्य किरणसँग तत्कालीन मसालका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता पनि मोहन वैद्यसँग छन् । माओवादी पार्टीमा यही नैतिक पूँजी प्राप्त भएका कारण मोहन वैद्य पक्ष प्रचण्ड र बाबुरामसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुगेको हो ।
प्रचण्डको जीवनशैली उहाँको पारिवारिक मोहका कारण उहाँलाई युद्धकालमा देवत्व मान्नेहरु भेद खुलेपछि निराश मात्र भएनन्, प्रचण्डलाई छोडेर उनीहरु प्रचण्डका प्रचण्ड विरोधी भए । प्रचण्ड माओवादी विद्रोहले स्थापित गरेको नाम हो । यो धु्रवसत्यलाई प्रचण्डले यति छिट्टै बिर्सिनुभयो कि उहाँ रातारात अर्कै वर्गमा पुग्नुभएको उहाँसँग संगत गरेका साह्रा माओवादी नेताहरुले महसुस गरे । उनीहरु भन्दैछन् – प्रचण्ड नाटककार हुन्, उनको छलछामले अब पार्टी अगाडि नबढ्ने भएपछि फुटसम्म पुगे ।
फुटको मुख्य कारण पैसा हो । नक्कली लडाकूदेखि लिएर पार्टीभित्र जम्मा पारेको पैसा प्रचण्डले नै पोको पारेपछि मोहन वैद्य पक्ष आगो मात्र होइन, ज्वालामुखी नै भयो । प्रचण्डलाई मोहन वैद्य किरण, बादल र गौरवले जसरी स्थापित गराएका थिए त्यही टिमले प्रचण्डकै व्यवहारका कारण माओवादी पार्टी फुट्यो । यो फुटले राजनीतिमा कस्तो असर पु¥याउँछ त्यो भोलिका दिनले स्पष्ट पार्नेछ ।